छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त हामीले बाणिज्य संघमा परिवर्तन गरेका छैनौ ? बिमल खतिवडाको अन्तरवार्ता – Sawal Nepal
छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस् त हामीले बाणिज्य संघमा परिवर्तन गरेका छैनौ ? बिमल खतिवडाको अन्तरवार्ता
१६ भाद्र २०७६, सोमबार १८:५०
एक पटक गम्भिर भएर सोच्नुहोस त !
३ बर्ष अघि र अहिलेलाइ आँखा चिम्लेर हेर्नुहोस त कति परिवर्तन भएको छ । एक पटक गम्भिर भएर सोच्नुहोस त !
Sawalnepal Digital News paper यांनी वर पोस्ट केले सोमवार, २ सप्टेंबर, २०१९
देशभर १३ सय १३ जना कोरोना संक्रमित थपिए